टिकटकमा भाइरल ४० लाखमा बनेको गाउँले घर कसको हो ? – Sandesh Press
November 19, 2021 113
काठमाडौ । नयाँ सामाजिक सञ्जाल भिडियो प्लाटफर्म टिकटकमा यो घर खुबै भाइरल बनेको छ ।यो घर बनाउँन ४० लाख लागत लाग्यो भन्दा जो कोहीले पत्याएका छैनन् । यो घर चितवन सदरमुकाम भरतपुरबाट नजिकै रहेको ठिमुरामा बनेको छ ।
यो घर अहिले अरु सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित भइरहेको छ। नारायणगढ बजारबाट करिब ५ किलोमिटरका दूरीमा रहेको ठिमुरा भन्ने ठाउँमा त्रिशूली नदीको आडैमा यो सुन्दर घर देख्न सकिन्छ। यो हाडजोर्नीको समस्या भएका बिरामीको उपचारका लागि चितवनमा चर्चा कमाएका डाक्टर प्रमोद लामिछानेले बनाएको घर हो ।
डाक्टर लामिछानेको पुर्ख्यौली घर लमजुङको राइनास–८ हर्राबोट हो। २०७२ सालमा आएको भूकम्पले उनकोमात्रै नभएर गाउँका प्रायःको घर भत्कायो। ‘आफू जन्मे–हुर्केको, पढे–खेलेको त्यो घर गुमाउनुपर्दा लामिछानेलाई असाध्यै पीडा भएको रहेछ ।बुबाले बनाएको पहाडी मौलिकता झल्कने त्यति राम्रो घरको कल्पना गरेर नै उनले यो घर बनाएका रहेछन् ।
मौलिक शैलीमा केही नयाँपन दिएर यो घर तयार पार्न इन्जिनियर साजन अधिकारीले काम गरेका छन् । २ महिनामा तयार भएको यो घरमा ७ वटा कोठा छन्। भुइँ तलामा तीन, दोस्रोमा तीन र तेस्रो तलामा एउटा हल कोठा छ। यो घर हेर्दा ठ्याक्कै पहाडी शैलीको देखिए पनि निर्माणका क्रममा आधुनिक विधि र प्रविधिको पनि प्रयोग गरिएको छ।
पिलर, गारोलगायतका संरचना तयार पार्न कंक्रिटकै प्रयोग गरिएको छ। फलामे डण्डी नै राखिएको छ ।घरको बार्दली, भर्‍याङ, दलिन, डाँडा, भाटालगायतको निर्माणमा साल र वन सिसौका काठको प्रयोग गरिएको छ। २० वटा आँखीझ्याल छन्। तेस्रो तल्लाको चारैतिर राखिएका बार्दली निकै आकर्षक देखिन्छन्।
Prevभुपेन्द्र संगै गएका साथीले खुलाए त्यो दिनको घटना
Next५ सय चोरेर काठमाडौं छिरेका ऋषि धमला महिनाको कति कमाउँछन् ? कति छ उनको सम्पत्ति ? जान्नुहोस्